२०७५ चैत्र ३, आईतवार १५:०२ गते मार्च 17, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on के दिउ बुढी
आज भन्दा ३५ वर्ष अगाडिको कुरा हो । म दाङ देउखुटी जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए । मेरो नक्कल दिने फाटमा काम गर्दथ्ये । अचानक मेरो घरदेखि फोन आयो भनेर । त्यस अदालतका कार्यालय सहयोगी उद्धव पौडेलले मलाई जानकारी दिए ।
म गए कुरा के रहेछ भने मेरो विवाह गर्नको लागि मेरो बुवा र मेरो कान्छो बुवाले केटी हेरेर केटीको बुवा लगायत अरु मान्छे समेत बसी बाहिर गाविस अन्तरगत ठिमुरे भन्ने ठाउँमा गुञ्जेश्वरी सरको घर टिका टालो गरी मलाई फोन गर्नु भएको रहेछ । कस्तो विडम्बनाको कुरा जसले जीवनभर एक आपसमा बाधिएर जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ’boutमा कुराकानी भयो । हामीले के गर्ने ? हामीले देख्न पनि पाएनौ उनी कानी छन कि म लङ्गडो छु की अन्दधुन्द बुवाहरुको निणर्य नै हुनु पर्ने म दाङदेखि घर आएको दुई दिनपछि यम्घा गाविसको वडा नं. ८ पीपलटोल भन्ने ठाउँमा तिलोचन पाण्डेकी छोरी रमा पाण्डेसँग मेरो विवाह भयो तर रातभरी पण्डितले मन्त्र भन्दै, पढ्दै गरे । उज्यालो भयो दाइजोमा दुई वटा गाग्री दुई वटा ताउला जोर जोर क्या दियो पाण्डेले भनेर अरुले भन्दथ्ये । हाम्रो बा को छोराको विवाहमा जोर जोर गाग्री ताउला पाउदा नाक घिरम्ला जत्त्रै हुने नै भयो । यसरी म र मेरी श्रीमतीले यसरी एक आपसमा राम्रोसँग देखेको पाथी भर्ने बेलामा हो । हिजो यसरी हाम्रो बुवाहरुले गरिदिएको विवाहमा के त्यस्तो जाँदु मन्त्र थियो कुन्नी म र मेरी श्रीमतीमा पहिला भन्दा माया झन हिजो आज बुढेसकालमा बढि लागेको महसुश गरे काछौ । २०२८ सालको फागुन २१ गते उनको जन्म भएको रहेछ । उनको जन्मदिनमा के दिउ बुढी तिमीलाई भन्दा जे मन लाग्छ त्यही दिनुस भनिन् । मैले उनको र मेरो कथा तपाईहरु माझ पस्के ।
तर हिजो आजका युवा युवतीले विवाह हुनु पूर्व एक घण्टा २ घण्टा कुरा गर्छन सँगै विवाह हुनु भन्दा अगाडि नै फोटा खिचेर फेसबुक, इन्टरनेटमा पोष्ट गर्छन् तर विवाह गरिसकेपछि सानो कुरामा मिल्न नसकेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोज्छन् त्यो राम्रो हुँदैन किन कि काम गर्नु भन्दा पहिला सोच्नु राम्रो हुन्छ । सोचेर गरेको काम आफूले बुझेर गरेको काममा सानो गल्ती भएको रहेछ भने पनि गल्तीलाई सहजसँग स्वीकार गर्न सकिन्छ । यस कारण प्रेम गर्नुभन्दा पहिला उसलाई बुझ उसको प्रेम गर्ने क्षमता छ की छैन प्रेम भनेको के हो माया कहाँ हुन्छ । बरै प्रेम आज छ भोली छैन आज आइलभ यु भोली बाइल व्यु । यसलाई प्रेम माया भनिदैन प्रेम जसलाई भनिन्छ आज भन्दा ३५ वर्ष अगाडि भएको विवाहको कथा ३५ वर्ष पछि त्यो पनि प्रेमिकाको जन्म दिनमा दिइन्छ लेखिन्छ त्यो नै प्रेम हो । यो नै सच्चा प्रेम सच्चा श्रीमान श्रीमतीको विश्वासको बुटी हो । प्रेम विश्वासमा फुल्छ फल्छ शंकामा न फूल्छ न फल्छ त्यसै जरैदेखि ढल्छ । अस्तु
२०७५ फाल्गुन ३, शुक्रबार १४:१६ गते फ्रेवुअरी 15, 2019 पाल्पा खबर
२०७६ मंसिर २, सोमबार १०:५१ गते नोभेम्बर 18, 2019 पाल्पा खबर